ပေါ်လစီ | ပြုပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်တယ် Neowise.org နှင့်အတူ don'ts
(ထို "ဆိုက်ကို") https://www.dubaicitycompany.com/ မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် privacy ကိုအွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကို၏အသုံးပြုသူများအဖို့အရေးကြီးတယ်ကြောင်းနားလည်
စီးပွားရေးနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသူကိုဧည့်သည်များလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သူဆိုက်ကို ( "လာရောက်လည်ပတ်သူများ") ၏အသုံးပြုသူများသည်
(စုပေါင်း, "န်ဆောင်မှုများ") ( "Authorized Customer များ") ။
သတ်မှတ်သို့မဟုတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုရည်ညွှန်းသည်, အဆက်အသွယ်, ဒါမှမဟုတ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏တည်နေရာကို
အဘယ်သူကိုထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များအပါအဝင်မှုနှငျ့ဆ, ဒါပေမယ့်အမည်, လိပ်စာ, ဖုန်းနံပါတ်, ဖက်စ်နံပါတ်, ကန့်သတ်မရ
အီးမေးလ်လိပ်စာ, ဘဏ္ဍာရေး profile များကိုလူမှုရေး, လုံခြုံရေးနံပါတ်နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ
ခွဲခြားသိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်မပါဘဲ, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ (အမည်ဝှက်စုဆောင်းကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များမပါဝင်ပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Authorized Customer များအနေဖြင့်အောက်ပါအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်း: အမည်များ, လိပ်စာများ,
ဖုန်းနံပါတ်နှင့်စာရေးဆရာ Customer များ၏အီးမေးလ်လိပ်စာများ, စီးပွားရေး၏သဘောသဘာဝနှင့်အရွယ်အစားနှင့်
အဆိုပါ Authorized ဖောက်သည်ဝယ်ယူသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းကြော်ငြာစာရင်း၏သဘောသဘာဝနှင့်အရွယ်အစား
သတင်းအချက်အလက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်စုဆောင်းခြင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိယပါတီထိုကဲ့သို့သောအကြွေးအဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုရောင်းချသူ (အပြင်
အကြွေးဝယ်, အာမခံကဲ့သို့သောန်ဆောင်မှုများပေးစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ကဒ်ကုမ္ပဏီများ, ခွဲ clearinghouses နှင့်ဘဏ်များ) နှင့်
အာမခံငွေန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များနှင့်စာရေးဆရာ Customer များအနေဖြင့်ဤအချက်အလက်စုဆောင်းလိမ့်မည်။
သူတို့ဧည့်သည်များနှင့်စာရေးဆရာ Customer များအနေဖြင့်သူတို့အဖို့ထောက်ပံ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပါ။ အချို့မှာ
ဆိုက်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များအပေါ်သုတေသနပြုသို့မဟုတ်ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းအခွင့်အလမ်းများအကြောင်းကို Authorized Customer များ
အဆက်အသွယ်လာရောက်လည်ပတ်သူများနှင့်စာရေးဆရာ Customer များသတ်သတ်မှတ်မှတ်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များမှတုန့်ပြန်, ဒါမှမဟုတ်မေတ္တာရပ်ခံပေး
Authorized Customer များနှင့် ပတ်သက်. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေး Authorized သည်အခြားအတူမျှဝေစေခြင်းငှါ
အခြားအ Authorized ဖောက်သည်တွေနဲ့အလားအလာအရောင်းအအကဲဖြတ်ရန်ဆန္ဒရှိသူကိုဖောက်သည်။
ငါတို့သည်လည်းသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိသို့မဟုတ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခံရ "ဖယ်ထုတ်" ကိုအခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်း
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအထက်တွင်ညွှန်ပြအဖြစ်အသုံးပြုရန် မှလွဲ. ။
သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း, အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးနှင့် ပတ်သက်. ဧည့်သည်များမှမရရှိနိုင်ပါကဘာလဲရွေးချယ်မှုရှိပါသလဲ
ဧည့်သည်များနှင့် Authorized ဖောက်သည်ထံမှမလိုလားသောသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားထားအဖြစ်အီးမေးလ်များကိုတုံ့ပြန်အားဖြင့်ငါတို့ကိုနှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းချသူနှင့်တွဲဖက်အေဂျင်စီများကဆက်သွယ်မေးမြန်းခံရထဲက, ဒါမှမဟုတ် Ul.piaskowa 35 / 25 မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် Legionowo Piaski ရွေးချယ်စေခြင်းငှါ
တစ်ဦးက cookie ကိုတစ်ဦးဧည့်သည်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ website တစ်ခုစတိုးဆိုင်များကြောင်းအချက်အလက်များ၏ string ကိုဖြစ်ပြီး, ဧည့်သည်ရဲ့ browser ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်ရန်ဧည့်သည်ကို return တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း။
ကွတ်ကီးအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များ၏ဦးစားပေးနှင့်သူတို့ကို select ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်ကွတ်ကီးကိုသုံးပါ။ ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Authorized Customer များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကွတ်ကီးကိုသုံးပါ။ တစ်ဦး Authorized ဖောက်သည်အပေါ် logged နှင့်ဆိုက် 10 မိနစ်ထက်ပိုပြီးအဘို့အသုံးမပြုဖြစ်ပါသည်လျှင်ဥပမာ, ကျနော်တို့အလိုအလျောက် Authorized ဖောက်သည်ချွတ် log ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် cookies တွေကိုက်ဘ်ဆိုက်အချို့ features တွေ cookies တွေကို၏အကူအညီမပါဘဲကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါ၎င်းအားနည်းချက်နှင့်အတူ https://dubaicitycompany.com အသုံးမပြုခင် cookies တွေကိုငြင်းဆန်ဖို့သူတို့ရဲ့ browser များသတ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်ရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိကြဘူးသူကိုဧည့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုပေး cookies များကိုအသုံးပြုရန်နှင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါသူတို့အ cookies များကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။ သငျသညျ cookies တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ cookies များကိုအင်ဖိုစာမျက်နှာများတွင်အသုံးပြုထားသည့်အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဘယ်လိုဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီသတင်းအချက်အလက်ရဲ့ login ကိုသုံးပါသနည်း?
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအပါအဝင် login သတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်ဘဲ, IP လိပ်စာများ, ISP များသည်, နဲ့ browser အမျိုးအစားများ, ခေတ်ရေစီးကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆိုက်စီမံခန့်ခွဲ, အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်အသုံးပြုမှုကိုခြေရာခံများနှင့်ကျယ်ပြန့်လူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းရန်။
အဘယ်အရာကိုမိတ်ဖက်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးဆိုက်ပေါ်တွင်ဧည့်သည်များနှင့် / သို့မဟုတ် Authorized Customer များအနေဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်?
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီထဲသို့ဝင်ခြင်းနှင့်မိတ်ဖက်များနှင့်ရောင်းချသူတစ်နံပါတ်ကတခြားဆက်နွယ်ပေါင်းစည်းမှုထဲသို့မဝင်ရဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့သောရောင်းချသူဝန်ဆောင်မှုအရည်အချင်းပြည့်မီဘို့ Authorized Customer များအကဲဖြတ်များအတွက်အခြေခံကိုသိရန်လိုအပ်အပေါ်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိစေခြင်းငှါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒကဤအချက်အလက်များ၏၎င်းတို့၏စုဆောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုကိုဖုံးလွှမ်းမထားဘူး။ ဥပဒေနှင့်အလိုက်နာရန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေးထုတ်ဖော်။ ကျနော်တို့ကတရားရုံးအမိန့်သို့မဟုတ်ဆင့်ခေါ်စာသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ချိမယ့်ဥပဒေအေဂျင်စီထံမှတောင်းဆိုချက်တစ်ခုနှင့်အတူလိုက်နာနိုင်ရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေးထုတ်ဖော်လိမ့်မယ်။ လာသောအခါကျိုးကြောင်းဆီလျော်လိုအပ်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များနှင့် Authorized ဖောက်သည်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးရန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေးထုတ်ဖော်လိမ့်မယ်။
ဘယ်လိုဆိုက်ကို secure ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေးစောင့်ရှောက်သနည်း?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးမူဝါဒနှင့်အလေ့အကျင့်တွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ကြ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များနှင့်စာရေးဆရာ Customer များ၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေးသတင်းအချက်အလက်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိနိုင်ရန်အတွက်စကားဝှက်ပေးထားကြသူအရည်အချင်းပြည့်မီန်ထမ်းတစ်ဦးကန့်သတ်အရေအတွက်သာသုံးစွဲနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ပုံမှန်ပေါ်မှာငါတို့လုံခြုံရေးစနစ်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ audit ။ ထိုကဲ့သို့သောခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်များသို့မဟုတ်လူမှုလုံခြုံရေးနံပါတ်များကိုအဖြစ်အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်, အင်တာနက်ကိုကျော်ကိုစေလွှတ်သတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရာအရပ်, encryption ကို protocol များဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးလုံခြုံ site ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စီးပွားဖြစ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဆောင်ရွက်မှုများယူနေစဉ်, အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် databases ကိုလက်ကမြင်း, အမှားများမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း,-ins ကိုချိုးဖျက်, ကြှနျုပျတို့ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များရာအရပျယူလိမျ့မညျမဟုကျွန်ုပ်တို့ဧည့်သည်များမှထိုက်သို့မဟုတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေအာမခံသို့မဟုတ်ခိုင်လုံနိုင်ဘူး မဆိုဤကဲ့သို့သောကွိများအတွက် Authorized ဖောက်သည်။
ဧည့်သည်များနှင့်စာရေးဆရာ Customer များကသူတို့ကိုနှင့် ပတ်သက်. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေး update လုပ်ဖို့သို့မဟုတ် office@dubacitycompany.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်တိပြင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါစေခြင်းငှါ
တစ်ဦးဧည့်သည်ဆိုက်ကစုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေး delete သို့မဟုတ်ပိတ်ထားနိုင်ပါသလား?
ကျနော်တို့ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ဆိုက်ရဲ့ဒေတာဘေ့စကနေကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေး deactivate / ပယ်ဖျက်ဖို့တစ်ယန္တရားနှင့်အတူဧည့်သည်များနှင့် Authorized Customer များကိုပေး။ သို့သော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျက်ခြင်း၏ Backup တွေကိုနှင့်မှတ်တမ်းများကြောင့်တချို့ကျန်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်ဆက်ပြီးမရှိဘဲဧည့်သည်ရဲ့ entry ကိုဖျက်ပစ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပေမည်။ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေးပိတ်ပြီးရှိသည်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့သူတစ်ဦးချင်းဤအချက်အလက် function ဖျက်ပစ်ရပါလိမ့်မယ်, ကြှနျုပျတို့ရောင်းချမည်မဟုတ်, လွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရှေ့သို့ရွေ့လျားမဆိုလမ်းထဲမှာတစ်ဦးချင်းစီနှင့်စပ်လျဉ်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များနှင့်စာရေးဆရာ Customer များဆိုက်ပေါ်မှာဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေပို့စ်တင်ငါတို့ privacy ကိုမူဝါဒအပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးဧည့်သည်သို့မဟုတ် Authorized ဖောက်သည်ယခင်ကထုတ်ဖော်မရမေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေးထုတ်ဖော်စေခြင်းငှါတစ်ဦးထုံးစံ၌ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒအပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်လျှင်သို့သော်ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောဧည့်သည်သို့မဟုတ် Authorized ဖောက်သည်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ခွင့်ပြုထိုကဲ့သို့သောဧည့်သည်သို့မဟုတ် Authorized ဖောက်သည်ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ် ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ဖော်။